Olee otú ibu bụ Tumblr? | Martech Zone
Ọ dị mma, ma eleghị anya ajụjụ mbụ bụ gịnị bụ Tumblr? Tumblr bu microblogging ikpo okwu na ebe nrụọrụ weebụ ịkparịta ụka n'socialntanet (nke Yahoo! nwere ugbu a). Ikpo okwu na-enye ndị ọrụ ohere ịdee ozi ọtụtụ na ọdịnaya ndị ọzọ na blog dị mkpụmkpụ. Usoro a ewulitela ụzọ iji soro ndị ọrụ ndị ọzọ kerịta - na-akwọ ụda nke njikọ aka na ọhụụ maka ndị na-eji ya. Ha nwekwara ezigbo mma mobile ngwa.
Ọ bụ ezie na anaghị m eme Tumblr ugboro ugboro, a na m eme ya kekọrịta ọdịnaya anyị na blọọgụ Tumblr m site na Jetpack mwekota nke WordPress gbakwunyere. M na-esochi Tumblr ole na ole ma nweta ozi imelitere ọfụma nke ọma site na sistemụ yana mwepịa nke onye keere. Dịka onye na-azụ ahịa, ị nwere ike ọ gaghị amata otu netwọkụ a buru ibu, n'agbanyeghị. Nọmba ndị mara ezigbo mma!
Nyocha ndị ọbịa na ebe nrụọrụ weebụ ekesara ihe ọmụma a ihe niile gbasara Tumblr:
Tags: otú ibu bụ tumblrtumblrtumblr na nke facebooktumblr na nke pinteresttumblr na nke twitterihe bụ tumblr
Ihe Ndị Ahịa Gị Na-eche Banyere Nzuzo